September 2016 မှာ စမည့် PC Hardware တန်းခွဲအသစ် တက်ချင်သူများအတွက် သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Myanmar IT Academy Training Center မှ
PC Hardware တန်းခွဲ အသစ်ဖွင့်မည့်အကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ MITA မှ IT နဲပတ်သက်ပြီး အမှန်တကယ် ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်စေရန် စာတွေ့ကော လက်တွေ့ကော သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သင်တန်းကျောင်းမှာ တမူးထူးတာကတော့ ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ Troubleshooting အကြောင်းများကို ဦးစားပေးသင်ကြားပေးနေ့တဲ့အတွက် သင်တန်းသူသင်တန်းသားများ သင်တန်းပြီးသည်နှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကောင်း များရရှိနိုင်ပါသည်။IT နည်းပညာ နယ်ပယ်တွင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့
အတွက် PC Hardware ကတော့ အခြေခံအကျဆုံး သိထားသင့်တဲ့ Subject တစ်ခုပါ။
အောက်မှာ သင်ကြားမည့် Chapter နှင့်တက်ရောက်မည့်ကျောင်းသားများ Requirement မှာ
အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Myanmar IT Academy မှ သင်တန်းဆင်းသွားသော သင်တန်းသူသင်တန်းသားများ ၊ Blog ကို လာလည်သော မိတ်ဆွေများ ၊Facebook Page ကို လာလည်သွားသောမိတ်ဆွေများ၊ Facebook Group Member မိတ်ဆွေများ၊ Regular Customer ၊ Individual Customer များကို အားလုံးကို အထူးကျေးဇူတင်ပြီး စိတ်ချမ်းသာ၊ကိုယ်ကျန်းမာစွာ အလုပ်အကိုင်တွေ
PC Hardware တန်းခွဲ Time Table
Time: Class1-Sat, Sun (4pm – 6pm)
Time: Class2-Mon,Tue (9am – 11am)
Time: Class3-Wed, Thu (9am – 11am)
PC Hardware တန်းခွဲ တက်ရောက်မည့်ကျောင်းသားများ သတ်မှတ်ထားသော တန်းခွဲအချိန်များနှင့်
အဆင်မပြေပါက မိမိအဆင်ပြေသော အချိန်များကို ကျွန်တော်တို့နဲ့
PC Hardware တန်းခွဲ သင်ကြားမည့် Contents များ
Chapter (1) Introduction to the Computer System
Chapter (2) CPU (Central Processing Unit)
Chapter (3) Memory (Random Access Memory)
Chapter (4) Mother Board (Mainboard)
Chapter (5) Storage Devices
Chapter (6) Graphic Card (Display Adapter)
Chapter (7) Power Supply
Chapter (8) MS-DOS Commands
Chapter (9) Group Policy
Chapter (10) Registry
Chapter (11) Using Partition Software and Windows Installation
Chapter (12) Driver Installation and Driver Backup
Chapter (13) System Backup and Hard Disk Clone
Chapter (14) System Restore, Data Recovery
Chapter 14 ခုလုံး ကို Theory & Practical သေချာသင်ကြားပေးသွားပါမည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက
PC Desktop & Laptop များကို ကျွမ်းကျင်စွာ တင်ဆင်နိုင်ပြီး၊ Windows & System Error များကို
PC Hardware တန်းခွဲ တက်ရောက်မည့် Students Requirement
1. လိုင်စင် ဓာတ်ပုံ၂ပုံ
2. Computer Basic အခြေခံရှိရမည်။
3. Fees : 70,000 ကျပ်
4. နည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားပြီး သင်တန်းကိုအချိန်မှန်မှန်တက်ရန်
(Computer Training & Services)
Address- No.11,6B, 3Quarter, Baho Street, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Facebook Page- https://web.facebook.com/mitaitpage
Facebook Group- https://www.facebook.com/groups/MyanmarITAcademy
Labels: MITA News No comments:
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ youtube က Video
Training Page ကောင်းတာလေးတွေ
တွေ့ထားလို Share ပေးလိုက်ပါတယ်။
Server PC Installation ပြလုပ်ပုံအဆင့်အဆင့်
Video Training တွေပါ။
Part1 Installing the motherboard
Part2 Installing the power supply
Part3 Installing the drives
Part4 Installing the CPUs
Part5 Installing CPU Cooling Units
Part6 Installing the RAM memory
Part7 connecting power, reset switches, and HDs
ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ EBook အသစ်တွေ့လေ့လာပြီး
Watch Video Training Link
Labels: Video Training Collection No comments:
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ Android Mobile ပေါ်က Linux
လေ့လာချင်သူများအတွက် Learning APK 2ခု ရထားလိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Linux Reference ပါ
APK ထဲ့မှာတော့ History of linux
Why linux,Linux Architecture,
Boot Process,Command line
User Accounts, Managing User,
Using sudoစတာတွေ ကို
Linux Command Library ပါ
Command Library ဆိုတဲ့အတိုင်း
Command တွေကို Library
Linux Reference APK Download
Linux Command Library Download
Labels: Andriod Application, Android Collection, Ebooks Collection, Linux Eook Collection No comments:
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ Android Mobile ပေါ်က Networking
လေ့လာချင်သူများအတွက် Learning APK ရထားလိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
APK ထဲ့မှာတော့ Basic Network Concepts
များဖြစ်တဲ့ TCP/IP, OSI Model ,Routers,
Lan Togpologies စတာတွေ ကို
CCNA Course APK ထဲ့မှာတော့
IOS Commands,IP Routing,
Computer_Networking_Concepts APK Download
CCNA Course APK Download
Labels: Andriod Application, Android Collection, Ebooks Collection, Networking EBook Collection No comments:
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ Android Mobile ပေါ်က PC Hardware
အဲဒီ APK ထဲ့မှာတော့ Basic PC Hardware Concepts
များဖြစ်တဲ့ Computer System, PC ရဲ့ Internal Part တွေဖြစ်တဲ့
CPU,RAM,BIOS,HardDisks,BIOS စတာတွေ ကို
ရှင်းပြထားပြီး Hardware Installation Video,
PC Hardware Question လေးတွေပါ
Test လုပ်ပြီး ဖြေလိုရပါတယ်ဗျာ။
ဒီ APK လေး အသုံးပြုဖို့
Adobe Air APK လေးပါ
ကျွန်တော် Adobe Air လေးပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
PC Hardware APK Download
Labels: Andriod Application, Android Collection, Ebooks Collection, Hardware EBooks Collection No comments:
ဒီ အပတ် 13.8.2016 စနေနေ့မှာ စမည့် Networking Class တက်ချင်သူများအတွက်သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Myanmar IT Academy Blog ကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြသော
ကျွန်တော်တို့ Myanmar IT Academy Training Center မှ Network Engineering တန်းခွဲ အသစ်ဖွင့်မည့်အကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့ MITA မှ IT နဲပတ်သက်ပြီး အမှန်တကယ် ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်စေရန် စာတွေ့ကော လက်တွေ့ကော သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သင်တန်းကျောင်းမှာ တမူးထူးတာကတော့ ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ Troubleshooting အကြောင်းများကို ဦးစားပေးသင်ကြားပေးနေ့တဲ့အတွက် သင်တန်းသူသင်တန်းသားများ သင်တန်းပြီးသည်နှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကောင်း များရရှိနိုင်ပါသည်။
သင်တန်းတက်ရောက်သူများကို အခြေခံ network တစ်ခုကိုမည်သို့တည်ဆောက်မည်၊မည်သို့ထိန်းသိမ်းမည် ၊မိမိ ရုံးဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းဖြစ်ဖြစ်network security လုံ့ခြုံအောင်မည်သို့လုပ်ရမည်။ Data Sharing , Ip Printer,Network Permission, စသည့် network ပစ္စည်းများကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်။ မည်သို့ဝယ်ရမည်။Network Troubleshooting များကို လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံရှိသော ဆရာများက စာတွေ့ကောလက်တွေ့ကော သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Network ပိုင်းသင်ကြားရင်း Wireless Networking ,Wireless Security and Microsoft Server အခြေံခံများကိုပါ သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းပြီးဆုံးပါက နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲများဖြေဆိုနိုင်ရန် အခြေခံကောင်းများရရှိမည့်အပြင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ တကယ် Troubleshoot ပြုလုပ်နိုင်မည့် Thinking များရရှိနိုင်ပါသည်။
Wire Cramping, Computer Networking Setup
Router Setup, Switch Setup
Network Management, Maintenance and Troubleshooting
NE တန်းခွဲ တက်ရောက်မည့် Students Requirement
2. Computer Basic, Hardware အခြေခံရှိရမည်။
3. Fees : 10,0000 ကျပ်
(Computer Training & Services Center)
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ Android Mobile ပေါ်က Computer Basic Concepts
လေ့လာချင်သူများအတွက် Learning APK ၂ခု ရထားလိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမ Apk လေးက Internet ဖွင့်ထားပြီးသုံးမှ အဆင်ပြေမှာ။
Computer Basic ဆိုတဲ့အတိုင်း On and Off the Computer,
Using the Mouse and Keyboard, Create and manage Files and folder,
Texts and Larger images, How to download and install
ဒုတိယ Learing Apk လေးကတော့ Internet မလိုပါဘူးဗျာ။
အဲဒီ APK ထဲ့မှာတော့ Basic Concepts of Computer,
Computer asaSystem, Generations of Computer,
Type of Computer, Computer Ports,
Hardware and Software, Type of software,
Operation System Interface, Storage Devices,
Internet History,What is Email?,
What is Networking?,စတာတွေ့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Learning APK လေးတွေရထားတာလေးတွေ
Download First APK
Download Second APK
Labels: Andriod Application, Android Collection, Computer Basic Ebooks, Ebooks Collection, Video Training Collection No comments: